မူနဲ့လူဘယ်ဟာပိုကောင်းသင့်သလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » မူနဲ့လူဘယ်ဟာပိုကောင်းသင့်သလဲ
Posted by Burma on Mar 14, 2012 in Aung San/Aung San Suu Kyi, Copy/Paste | 16 comments
♦ “နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ လူနဲ့မူ ဘယ်ဟာ ပိုအရေးကြီးလဲ လို့ မေးကြတယ်။ ကျွန်မ ပြောမယ်နော် ၊ မူက အရေးကြီးတယ် ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မူက လူတွေကို ထိန်းထားလို့ရတယ်။ မူမကောင်းရင် တော့ ကောင်းတဲ့သူတွေတောင် ပျက်စီးကုန်မယ်”
မူကောင်းလို့ကောင်းကြေးဆို လူဦးရေးအများဆုံး ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေမှာ ဘာတွေဖြစ်နေကြလဲ? .. ပညာတတ်တွေ တအားပေါတဲ့နိုင်ငံမှာ ဘာတွေဖြစ်နေကြလဲ? မူကောင်းကြေးဆိုရင် ဘာ ဆိုရှယ်လစ် ၊ ဘာကွန်မြူနစ် ၊ ဘာ ဒီမိုကရေစီမှမလိုဘူးလို့ထင်တယ်။ ဂေါတမ ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ “ကိုယ်ချင်းစာတရား” ဆိုတာလေးတစ်ခုတည်း မူအနေနဲ့ထားပြီး လိုက်နာပြီးနေထိုင်ကြည့်လိုက်။ သားပုမြင်တာကတော့ မူကောင်းဖို့ လိုသလို အဓိက ပဓာနကျတာ မူထက် လူက ပိုပြီးအဓိကကျတယ်။ အဲ့ဒိ ကိစ ကိုနယ်ပြန်တော့ အဖွားကိုပြောကြည့်တော့ အဖွားက သူဖတ်ဖူးတဲ့ ဗမာ့ Socialism စာအုပ်တစ်အုပ်လုံး အစအဆုံးဖတ်ပြီးတော့ ကြည့်လိုက်တော့ Socialist လမ်းစဉ်ဟာ သောတာပန်တွေ လမ်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခဏအတွင်းမှာ မကောင်းတဲ့သူတွေကြောင့် စုတ်ပြတ်သတ်သွားပါတယ်။ အဲ့လိုပဲ ပြည်တော်သာစီမံကိန်းဆိုတာကလဲ ခလေးအငိုတိတ်အောင် ပြတဲ့ ဖိုးလနတ်သားလိုပါပဲ။ ဘယ်လိုပဲ စီမံကိန်းတွေ ချချ။ ဘယ်လောက်ပဲမူက ကောင်းနေခဲ့ ၊ မကောင်းတဲ့လူတွေကြောင့် ပျက်စီးသွားရတာပါပဲ။ ဒါ့အပြင် မူဆိုတာ လူက ချမှတ်တာပါ။ ကောင်းတဲ့လူတွေရှိမှ ကောင်းတဲ့မူဆိုတာ ဖြစ်လာနိုင်တာမဟုတ်ပေဘူးလား? ယခင် အညိုရောင်နယ်မြေ မှာ Communist ခေတ် (ကျွန်တော့မွေးရပ်က ယခင် အဲ့လိုပါ) မှာဆို မဟုတ်တာလုပ်ခဲ့ရင် ၊ ယုတ်ဆွ ကောင်မလေးတွေကိုနှောင့်ယှက်လို့ တိုင်ခဲ့ရင်တောင် ကိုယ့်ကျင်းကိုယ်တူးပြီး တူးပြီး ဂေါ်နဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ပြီး တစ်ခါတည်းသတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ကျည်တောင်မသုံးပါဘူး။ ကျည်အကုန်မခံနိုင်လို့တဲ့။ အဲ့လိုခေတ်မှာတောင် ခိုးဆိုးပျက်စီး ခဲ့ကြတာပဲ။ ဆရာဆရာမတွေကို စေတနာ ၊ အနစ်နာ ၊ မေတာနဲ့သင်ကြားပေးဖို့ ပြောတယ်။ အဲ့စေတနာတို့ မေတာတို့ဟာ လူက လာတာပါ။ မူက လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆရာဆရာမတွေ ကိုရိုက်နှက် ၊ ဥပဒေ ပြဌာန်းပြီးသင်ခိုင်းလဲ ၊ မေတာနဲ့မသင်တတ်တဲ့ဆရာမက ဘယ်လိုမှ မသင်ပါဘူး။ ဒါဟာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်က လာတာပါ။ မူက လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ခုလိုခေတ်ကြီးမှာ ကောင်းတဲ့လူတွေရှိမှ ကောင်းတဲ့မူလမ်းစဉ်ကိုလိုက်ပြီး တိုင်းပြည်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အုပ်ချုပ်နိုင်မှာပါ။ အဲ့တော့ သားပုအမြင်မှာ မူ ဆိုတာကောင်းဖို့လိုသလို (ပြောရရင် မူတိုင်းကောင်းကောင်းရေးကြတာပါပဲ) ၊ လူတွေကောင်း ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အမြင်လေးတွေ ဆက်လက် ပြောပြပေးပါ။
မူဆိုတာ လူကိုလိုက်ပြီး မပြောင်းလဲသင့်ပါဘူး။ ကြီးငယ်မရွေး မူတစ်မျိုးထဲ ရှိသင့်ပါတယ်။
♦ ဘာကိုဆိုလိုသလဲ နားမလည်လို့ခင်ဗျ ?
ဘာ မူ မှ မရှိသေးခင် စနစ်ပျက်ကြီး မှာတော့ လူကောင်း နဲ့ ဘဲ မူကောင်း ကို ရအောင် လုပ်လို့ ရပါမယ်။
အဲဒီ ကောင်းတဲ့ ခိုင်မာတဲ့ မူ ကမှ နောက်ပိုင်းမှာ လူ တွေ ကို ထိန်းသွားပါမယ်။
ဒီမိုကရေစီ စနစ် ဆိုတာ ခိုင်ခိုင်မာမာမရသေးသ၍ လူကောင်းများ ရရန် အရေးကြီးသည်။
အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် မူကောင်း က အလိုလို မဖြစ်ဘဲ
လူက လုပ်ပေး ချပေး ပြဌာန်း ပေးရမည် ဖြစ်သောကြောင့် လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီမိုကရေစီ စနစ် တစ်ခု ခိုင်ခိုင်မာမာ ပေါ်သွား ရင်တော့ ချမှတ်တဲ့ မူဝါဒကောင်း တွေ နဲ့ ဘဲ လူတွေ ကို ထိန်း သွားနိုင်ပါ။
ဒီတော့ အဲဒီအချိန်မှာ မူဝါဒ ကောင်း တွေ ချဖို့ အရေးကြီး လာပါပြီ။
အဲဒီမှာ မူဝါဒ တွေကို ဖောက်ဖို့ကြိုးစားသူ တွေကို ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ မီဒီယာ ဆိုတာ အရေးကြီးဆုံး ကဏ္ဍ ကပါလာပြီပေါ့။
လက်မ တစ်ချောင်း နဲ့ အားပေးသွားပါတယ် သားပု ရေ။
စာမေးပွဲ ဖြေနိုင်လား? :-)
♦ ဟုတ်ဖြေနိုင်တယ်ဗျို့… နောင်အပတ်ကစပြီး ဆယ်တန်းစာတွေ စလုပ်ရပြီ.. ကြားထဲ သိပ်မတွေ့နိုင်တော့ဘူးပေါ့..
မူကအရေးမကြီးဘူး ဘားမားရေ လူကအရေးကြီးတယ် ခဗျတို့ကျုပ်တို့လက်တွေ့လေ အနားယူသွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ မူတွေကတော့ ထိုင်ငေးသွားမယ် လူကစိတ်ဓာတ်မကောင်းတော့လုပ်လိုက်တိုင်း သူ့အတွက်ချည်းပဲ
အမြင်လေးတွေ ပြောပြပေးပါ ဆိုလို့ နည်းနည်းပြောကြည့်မယ်နော…
လူဆိုတဲ့ ကိုယ်ကောင်ဟာ အဖြူထည် ဘာမှ အပြစ်မရှိဘူး..သို့သော် သိပြီး ပွါးများထားတာ ဘာတခုမှ မရှိသေးတဲ့ အတွက် အစွဲကလွတ်သူ.. တန်ဖိုးရှိတဲ့လူ လို့ခေါ်လို့မရသေးဘူး.. ဘုရားဟာ …ဘုရားအဖြစ်ကို မရောက်ခင် လူကိုယ်ကောင် အဖြူထည်ပါ…သာမန်လူတွေနဲ့ အတူတူပါ..သို့သော် ကဆုန်လပြည့်နေ့မှာ ဘုရား အဖြစ်ရောက်သွားတာဟာ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးဆိုတဲ့ သမ္မာ ဆိုတဲ့တရားတွေကို ဆင်ခြင်ပွါးများပြီး ဘုရားအဖြစ် ရောက်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက်… ဥတ္တရိမနုဿ လူသား?တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူသား အဖြစ်ရောက်သွားပါပြီ..ဒါကြောင့် စည်းစနှစ်ရှိတဲ့လူ၊ မူစနှစ်ကောင်းရှိတဲ့ လူလို့ခေါ်ရပါတယ်..အရိယာသူတော်ကောင်းရဲ့မူစနှစ်က.. လွတ်မြောက်မှု ဝိမုတိ္တရသ အပြည့်ဝပါတယ်..
ယနေ့ကမ္ဘာမှကျတော့…. လက်ခံထားတဲ့ မူဥပဒေဟာ လက်တွေ့နဲ့ စာတွေ့မှာ တစ်ထပ်တည်း မဖြစ်တာတွေ တွေ့ရတယ်…
ဥပမာ.. (1) Legal Justic
(2) Social Justic ဆိုပြီးမူနှစ်မျိုးရှိပါတယ်…
လူတွေမတရားခေါင်းပုံဖြတ်တာ ရှိတဲ့အတွက် ဆင်းရဲ့ကွာဟမှုကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ လုပ်ရှားတာ Social Justic အရ တရားတယ်..ဒါပေမဲ့ တဖက်ကျတော့ ငါတို့ ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကို ကာကွယ် ပိုင်ခွင့်ရှိတာ Legal Justic အရတရားတယ်လို့ ဆိုပြန်ရော…မိမိ အမြင်ကို တင်ပြကြည့်တာပါ…ကျေးဇူး…
မူကောင်းရှိရင် လူကို ပြန်ပြီးထိန်းကျောင်းသွားပါတယ်။
ခေတ်သုံးလေးခေတ်ကို ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဖြတ်သန်းခံစားခဲ့ရတော့ လေနဲ့ငြင်းနဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ချင်တော့ဘူး။
မူကောင်းနဲ့လူကောင်း ခဏလေးတွေ့တာမဟုတ်ဘဲ အမြဲတွေ့ဘို့လိုအပ်တာ။
မူကောင်းနဲ့လူကောင်း ခဏလေးတွေ့တာမဟုတ်ဘဲ အမြဲတွေ့ဘို့လိုအပ်တာ။မူကောင်းနဲ့လူကောင်း ခဏလေးတွေ့တာမဟုတ်ဘဲ အမြဲတွေ့ဘို့လိုအပ်တာ။
ဒါကြောင့်လူကောင်းတွေက အများပြည်သူ လူကောင်းဖြစ်အောင်
ဒါပေမဲ့ ငယ်ငယ်တုံးက ကျောင်းမှာဆိုခဲ့တာလေးရှိခဲ့တယ်၊အဲဒါက
ဒါကြောင် မြန်မာပြည်မှာ လူတော်တော်များများ မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်
ကြိုးစားနေတဲ့အဆင့်မှာ မိမိကိုယ်မိမိ ကောင်းလာဖို့အားမရလို့
ကျွန်တော်နယ်ပြန်တော့ လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်…. အိမ်နားမှာပေါ့.. သူက အရက်ဆိုင်က ထွက်လာပြီး အရက်ပုလင်းကိုင်ထားသေးတယ် ဆိုင်ကယ်ပေါ်တက်ခါနီး သူ့အကျိင်္သူကိုင်ပြီးပြောတယ် ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်ကြီး အတွက် ဘယ်လိုကြိုးစားနေတယ်ငါတို့ ပါတီလမ်းစဉ်က ဘယ်လိုကွ ဆိုပြီးပြောသွားတယ်။ပြောသွားတဲ့စကားတွေ အကုန်လုံးက တကယ့်အကောင်းတွေကြီးပဲ။ ငါက စည်းမှူးကွ (စည်းရုံးရေးမှူး) ဆိုပြီး…တက်သွားလေရဲ့… . .(ဘယ်ပါတီကလဲမပြောတော့ပါ) လူကတော့ မူးနေတယ်။ အဲ့တော့ ကိုယ့်ကိုကို တောင်ကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ပဲ နိုင်ငံတော်ကြီးဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ကြမလဲ။
မူဝါဒကောင်းမွန်နေပေမဲ့ လိုက်နာရမဲ့ လူတွေ ကောင်းမွန်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်မိတာပါ။ ခုခေတ်မူဝါဒကိုကောင်းမွန်နေတယ်မပြောပါ။ အဆုံးအစွန်ထိ ဟန်ပြအားဖြင့် မူဝါဒကောင်းမွန်နေရင်တောင် ကောင်းတဲ့လူတွေမရှိပဲ ၊ လာဘ်စား ၊ ခြစား နေတဲ့လူတွေရှိနေခဲ့ရင် ဘယ်လိုမှကောင်းလာမယ်လို့မထင်ဘူး။. .. နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဥပဒေ မူဝါဒကို မကောင်း အောင်ရေးထားတဲ့ မူဝါဒ ရှိတဲ့နိုင်ငံလို့ မတွေ့မိဖူးဘူး။ ဥပဒေကို လက်တစ်လုံးခြားလုပ်တယ်ဆိုတာတောင်ရှိသေးတာပဲ။ . ..